I-Turbonada: kuyini, izici nokwehluka ngeziphepho | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Ngaphakathi kwezimo zezulu nezinhlobo zemimoya kukhona esinakho squall. Luhlobo lomoya olubonakala ngokungazelelwe futhi ngejubane elinamandla kakhulu. Isikhathi salolu hlobo lomoya lufushane kakhulu futhi senzeka ezindaweni ngokwendawo okunomkhuba wokubanda.
Kulesi sihloko sizokutshela zonke izici, imvelaphi kanye nemininingwane ehlukile mayelana ne-squall.
2 Imigqa ye-squall neqhwa
3 Umehluko phakathi kwe-squalls kanye neziphepho
Okokuqala, bona ukuthi isikwashi sisho ukuthini. Emkhakheni wemeteorology, kusho ukuthi wuhlobo lomoya oluvela ngokuzuma, ngokushesha nangamandla amakhulu. Ukuhlukaniswa kwayo kuyehluka kuye ngejubane lomoya. Lokho wukuthi, ukuze umoya uhlukaniswe njenge-squall kumele ibe nemimoya cishe engamakhilomitha angama-40 ngehora.
Kodwa-ke, kuya ngezwe esikulo, ingquza ibizwa ngamagama ahlukene. EMexico kuvamise ukubizwa ngeSiphepho, eVenezuela "Vaporón", eArgentina "Stormy", eBrazil "Turbiña", ePeru "Solplo", eColombia "Rafagueta". Kungashiwo ukuthi, ngokujwayelekile, lo moya usungulwa njengohlobo lomoya onesikhathi esithile noma ngaphezulu kwengxenye yalokho umoya onamandla ongaba nakho ebangeni elithile.
Lesi sigubhu singakhula futhi oketshezini olufana namanzi futhi kulapha lapho bezibonakalisa khona ngokusebenza kokuhamba kahle kwamanzi lapho isisindo nesivinini zihlala khona. Lolu hlobo lomoya lungabonakala ngokuvuvukala nemisinga yamanzi eshesha kakhulu. Kwezinye izimo, ama-eddies aphezulu angakha, njengemisinga yokubhema. Le misinga izalwa ngoshimula noma iyatholakala nakuma-mist phakathi neziphepho, phakathi kokunye.
Imigqa ye-squall neqhwa
Uma sikhuluma ngesigaxa seqhwa sikhuluma ngomsinga womoya obanda kakhulu onesivinini esikhulu nesikhathi esifushane kakhulu. Lapho unendawo enamazinga okushisa aphansi, okuqukethwe umoya kuqukethe izinhlayiya ezincane ze-oxygen efriziwe. Le misinga ineziyaluyalu kakhulu, evimbela ukubonakala okuyingxenye nokuphelele kuye ngobukhulu bayo.
Zihlukile ekushayweni ngumoya kwazise zinesikhathi kungukuhleleka cishe kwemizuzu engu-15-20. Imvamisa lolu hlobo lwesimo sezulu lubanga izinkinga ezinkulu ezindaweni lapho lwenzeka khona. Kwenzeka ikakhulukazi kulezo zindawo ezinamazinga okushisa angaphansi kuka-0 degrees. Kuhambisana nemvula yesimo samakhekheba eqhwa alula kakhulu futhi ahamba ngesivinini esikhulu. Bangakwazi ukugcwalisa izindawo ngeqhwa ngokushesha. Ungabona kalula ukuthi zimboza kanjani uphahla lwezindlu, imigwaqo, izindlela nezimoto. Ziyingozi ngempela uma zikufica ungalindele.
Imigqa ye-squall iqukethe ukuba khona kweziphepho eziningana zikagesi ezincikanayo. Ingakhiwa ngokufana futhi ihlanganise izingqimba ezimbili ezishisayo nezibandayo. Ukuze lolu hlobo lwezimo zezulu lukwazi ukwenziwa ukungqubuzana kwemikhawulo yamazinga okushisa ahlukene kuyadingeka. Umugqa we-squall ungakhiwa ngemuva kokuduma kwezulu kwehlukane kwaba izingxenye eziningana.
Kunezinhlobo eziningi zemigqa ye-squall. Luhlobo lwamafu alayishwe umusi omningi nomoya okhula ngokushesha bese uwa. Ukunyakaza komoya kuyashesha kangangokuba akuvumeli ukuthi amanzi ajiye futhi adale imvula.
Olunye uhlobo lwe-squall olukhona luhlobo lwe ifu elimnyama eligcwele inani elikhulu lomhwamuko wamanzi. Lomhwamuko wamanzi uhlala engxenyeni engenhla yomkhathi ngendlela ezinzile okwesikhashana esifushane kakhulu. Kuwo wonke lesi sikhathi kungenzeka ukunweba imimoya ibheke ezindaweni eziphakeme kakhulu futhi bavikela okuncane kakhulu njengangaphambili. Kwenzeka ngokushesha okukhulu okungavumeli ukufinyelelwa kwamanzi.
Iningi lazo zonke lezi mimoya zenzeka e-United States futhi kuvumela ukuthi kutholakale ukuthi iningi lezulu eliduma ngamandla futhi elinamandla lenziwa ngemigqa yesikwele. Imvamisa zidlula ngokushesha endaweni lapho zisuka khona, zilayishwe umswakama.
Umehluko phakathi kwe-squalls kanye neziphepho
Kulula ukudida lezi zinhlobo zezimo zezulu ngoba zinomsuka ofanayo. Ziyizinto ezifanayo zesimo sezulu njengoba ukubonakala kobukhona nakho kufana kakhulu. Bobabili banomehluko omkhulu futhi wukuqeqeshwa kwabo. Ukufuduswa nakho kunokwehluka okuthile. Iziphepho zisuselwa ekucindezelweni okunamandla komoya okwenyuka ngejubane futhi ngokushesha lapho zihlangana nazo ukuqondanisa kuqala ukujikeleza ngokushesha okukhulu. Lokhu kuveza ukuphakama kwemimoya ehamba nazo zonke izinhlayiya zothuli nesihlabathi emhlabathini. Amandla amakhulu kakhulu kangangokuba angaphakamisa izimoto ezinkulu noma izilwane uma zingqubuzana nomfutho womoya okhuphukayo.
Uma kwenzeka ukuthi isiphepho senzeke olwandle, sakhiwa ngendlela efanayo kodwa ngomehluko wokuthi, emanzini ukukhiqiza amandla ayo nokufeza ukuphakama okufika ku-km. Kusukela ezikhathini zasendulo, imvula yezinhlanzi kwakukhulunywa ngayo ngokuthile okuhlobene nonkulunkulu. Namuhla kuyaziwa ukuthi imvula yezinhlanzi ihlobene nokuba khona kweziphepho zasolwandle.
Njengoba sazi ukuthi ziyini izingquza, singasho ukuthi kuya ngamandla eyikhiphayo, icishe ifane nesiphepho. Noma kunjalo, isikhathi asidluli imizuzu engama-30 futhi singadala umonakalo omkhulu futhi sikhuthaze isiphithiphithi ngezikhathi ezincane kakhulu. Uma lesi sikhathi sesidlulile, isikhathi siqala lapho umkhuhlane uqala ukwehlisa futhi wehlise inani lemvula. Bethula ukuvunguza komoya okungadluli imizuzwana engu-15-30 futhi kungafinyelela ku-200 km / h wejubane eliphezulu. Uma lo muntu ehlangabezana nenye yalezi, angalimala kakhulu.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi nge-squall nezimpawu zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » I-Turbonade